Technology Engineering Waddooyinka ee Spain iyo Civil Engineering ee Shiinaha ee sano oo kaliya 4 - egeomates
Injineernimada Road Technologies ee dalka Spain iyo injineeriyadda madaniga ee Shiinaha oo kaliya sanadaha 4
Luulyo, 2015 Baridda CAD / GIS, Engineering, dhowr
University of Burgos leeyahay iskaashi xiiso leh Jiaotong University Chongqing ee Shiinaha, halkaas oo Shahaadooyinka of Engineering Technology Highway iyo heerka uu Civil Engineering ee Shiinaha waxaa lagu bixiyaa, waxa ay u malaynayeen oo ku saabsan qiyaas caalamiga ah ee hadda jira iyo kuwa mustaqbalka xirfadda.
Degree ee Pathways Technology Engineering ay la socdaan Master of Civil Engineering, Idaacadaha iyo Dekedaha karti ee nidaamsan xirfad Civil Engineer, Idaacadaha iyo Dekedaha ee la xiriira xuquuqda oo dhan in sharcigu uu iyaga ka siinayo waajibaadka xirfadeed.
Afar sano ka dib ardaygu wuxuu heli doonaa laba darajo iyo heer ku filan oo ah saddexda luuqadood ee ugu afka dheer ee adduunka ah: Ingiriis, Isbaanish iyo Shiine.
Si tan loo sameeyo, ardayda labada jaamacadood waa inay qaataan laba koorsood oo ay ku qaataan jaamacadahooda iyo labadii sano ee ugu dambeeyay jaamacadda kale. Labada sano ee ugu horeeya ardaygu wuxuu wax ku baran doonaa luuqada jaamacaddooda, sannadka saddexaad ee Ingiriisiga iyo sannadkii ugu dambeeyey ee luuqada Jaamacadda ee ku taal.
Dabcan, tan awgeed, waa qasab in shan saacadood oo Shiine ah lagu baro Xarunta UBU ee Luuqadaha Casriga ah iyo in, intaas waxaa sii dheer, Jaamacadda Chongqing Jiaotong waxaa laga codsaday inay casharro Shiinaha ku barato ardayda UBU. qasab ah, sanadkii saddexaad iyo afraad, markii ay horeyba wax ugu soo baranayeen Shiinaha.
Jaamacadda Chongqing, waxay bixin doontaa sanadka afraad ee suurtagalka ah in lagu qoro maadooyinka barnaamijka English Friendly. Saldhigyada guud ee barnaamijkani waa macallimiinta, dalbashada, waxay bixin doonaan qalabka wax lagu dhigayo maadada Ingiriisiga waxayna bixin doonaan suurtagalnimada barashada iyo imtixaannada Ingiriisiga.
Ardayda waxaa laga rabaa inay bartaan heerka B2 ee Ingiriisiga ah inta aysan dhameynin koorsada sadexaad.
Intaa waxaa dheer, jaamacadaha waxaa ku jiri doona barnaamijyo gaar ah oo soo dhaweynaya, kuwaas oo diirada saara ardayda si loo tuso adeegyada, adeegyada, helitaanka, taageeraya nidaamka oo keliya ma aha diiwaangelinta laakiin sidoo kale kuwa kale sida raadinta hoyga.
Macluumaad dheeraad ah ee ku jira Bogga UBU.
Post Previous«Previous maps Web soo nooleeyo cartography taariikhiga
Post Next Tuuray - software A free for falanqaynta dembigaNext »